‘६क्का पञ्जा–२ मा आफ्नो नाम कण्ठ गर्नै १५ मिनेट लाग्यो’ | Jukson
नेपाली हास्यव्यंग्य जगत्का लागि परिचित नाम हो– जितु नेपाल। हास्यसिरियल ‘जिरे खुर्सानी’मा ‘मुन्द्रे’को भुमिका निर्वाह गरेर उनी दर्शकको प्रिय बनेका हुन्। उनी अभिनित ‘६क्का पञ्जा–२’ असोज–११ गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ। नेपालखबरले बिहिबार बिहान–बिहानै टेलिफोन गरेर उनको हिजोआजको दैनिकी बुझ्न खोजेको छः
ठ्याक्कै अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म अहिले भान्सामा चिया बनाउँदैछु । सधैँझै बिहान साढे पाँच बजे उठेँ। एकछिन एक्सरसाइज गरेँ। नुवाईधुवाई गरेँ। आज घटस्थापना भएकाले श्रीमती र म भएर दुर्गा पुजा गर्यौँ। अहिले श्रीमती खाना पकाउने तर्खरमा छिन् । मचाँही ब्ल्याक टि पिउँदै लेख्ने तयारीमा छु ।
के लेख्ने तयारी हो र?
भोली र पर्सि ‘जिरे खुर्सानी’को सुटिङ छ। त्यसकै तयारी हो। आज दिनभरमा दुई भागको स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने छ।
‘जिरे खुर्सानी’को ‘कमब्याक’पछि कस्तो प्रतिक्रिया मिलिरहेको छ त?
एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया छ। पहिले सिरियलको जुन ख्याति थियो,त्यो अझै घटेको रहेनछ। देशको राजनीतिक अवस्थामाथि व्यंग्य गरिरहेका छौँ।
तपाईंहरुको व्यंग्यको विषय सधैँ उही राजनीतिक अस्थिरता, अव्यवस्था र अराजकता नै भयो। कहिलेकाँही त व्यंग्य गर्नुु नै बेकार रहेछ भन्ने महसुस हुँदैन?
अब के गर्नु त? हेर्नुस् न संविधानले २६ जना मन्त्री बनाउनु भनेको छ, प्रधानमन्त्रीले ५६ पुर्याइसके। अझै बढाउँछु पो भन्छन्! राजनीति भनेको त बाँडेर खानुमात्रै हो भन्ने भइसक्यो। अब त मलाई पनि राजनीतिक विषयमा व्यंग्य अलि बढी भएको हो कि भन्ने महसुसचाँही भएको छ। सामाजिक चासोका विषयमा व्यंग्य गर्छु अब। तर हामीले गरेको व्यंग्यले समाज परिवर्तन हुने, नेता परिवर्तन भइहाल्ने भन्नेचाँही हुँदैन है। त्यो खालको नैतिकता हामीकहाँ छदै छैन्।
‘जिरे खुर्सानी’मा तपाईंको पार्टनर शिवहरी पौडेल (प्वाक्क मुखमा हान्नु जस्तो)लाई कत्तिको मिस गरिरहेका छन्?
मैले पनि गरिरहेको छु, दर्शकले पनि अलिअलि गरेका होलान्। तर उहाँको आफ्नै सिरियल भएकाले दर्शकले त्यति धेरै मिस नगर्लान्।
‘जिरे खुर्सानी’ खासमा बन्दचाँही किन भएको थियो?
आर्थिक कारणले नै हो। पैसै दिँदैनन् अनि के गर्नु? अब टेलिभिजनले पनि हामी बनाउनेलाई सिधैँ सम्पर्क गर्दैन्, मिडिया एजेन्सी नै चाहिन्छ।
अब त बन्द नहोला नि?
भन्न सकिँदैन। मैले र मेरो ३० जनाको युनिटले पारिश्रमिक पाइरहुन्जेलसम्म बन्द हुँदैन। नत्र त बन्द हुन सक्ला!
तपाईं बिहान सधैँ व्यायाम गर्नुहुन्छ?
घरमा सामान्य हिसाबले गर्छु। जीउलाई हल्का त तन्काउनैपर्यो नि!
यताउता गफ गर्दा र फेसबुक चलाउँदा ११ बजिहाल्छ।
स्टेजमा त धेरै फेसबुक नचलाउनु भनेर सुझाउनुहुन्छ। फेसबुक धेरै चलाएर अब त परिवार नियोजन नै नचाहिने अवस्था भइसक्यो भन्दै व्यंग्य गर्नुहुन्छ, होइन र?
हो, हो(हाँस्दै)। धेरै नचलाएको राम्रो हो तथापी म पनि त्यसबाट विमुख छैन(हाँस्दै)।
‘६क्कापञ्जा–२’को पब्लिसिटी टुर सकेर पोखराबाट अस्ती राति दूई बजे आइपुगेका थियौँ। त्यसैले हिजो बिहान १० बजेसम्म सुतियो। त्यसपछि मिडिया हब गएँ। ‘जिरे खुर्सानी’को सुटिङ गरेँ। फिल्म रिलिज नजिकिएकाले दिउँसो एकछिन दिपक–दिपालाई भेटेँ। राति आफ्नै सिरियल हेरेँ।
अब ‘६क्कापन्जा–२’को कुरा गरौँ, तपाईको भुमिका के छ फिल्ममा?
उही ‘६क्कापञ्जा’जस्तै पण्डित कै रोल हो। म गाउँमा पण्डितकै छोरा हुन्छु।
ट्रेलरमा त तपाईंको नाम सुनेरै हिरोइन आत्तिएकी छिन् त?
हो नि, नाम लामो छ–श्यामहरी सरस्वतीभक्त कृष्णार्जुनप्रसाद पोखरेल उपाध्याय। यो नाम कण्ठ गर्नै मलाई १५ मिनेट जति लागेको थियो। त्यो सिन ओके गर्न नै पाँच टेकजति लिनुपरेको थियो।
अहिले नेपाली फिल्ममा कमेडी अनिवार्य भइसकेको हो?
कमेडी छैन भने त फिल्म किन हेर्नु? समय र व्यस्तताका बाबजुद मान्छे मनोरञ्जन लिनका लागि फिल्म हेर्न आउँछ। दुःख पिडा बिर्सेर रमाइलो चाहिएर नै फिल्म हेर्न आउने हो। समग्रमा मान्छेलाई मनोरञ्जन नै चाहिन्छ। हाँस्य विनाको त संसार नै छैन् नि! त्यसैले पनि फिल्ममा हास्यकलाकार अहिले अनिवार्य भएका हुन्।